Tag: la | Sagal Radio Services
Madaxweyne Farmaajo oo la kulmay wiil dhalinyaro ah oo siweyn u qabsaday baraha bulshada
Sagal Radio Services • News Report • February 12, 2017
Wiilkan dhalinyarada ah oo magaciisa lagu sheegay Cabdullaahi Max’uud Cismaan oo siweyn uga soo muuqday baraha bulshada ayaa la kulmay madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Max’ed Cabdullaahi Farmaajo.
Ciidamada Booliska oo gacanta ku dhigay hub lagu qariyay Masaajid (Sawirro)
Ciidamada Booliska Soomaaliya ayaa baaritaano ay ka sameeyeen masaajid ku yaal degmada Hodan waxay ku soo heleen hub iyo lacag lagu qariyay.
Doonyo gargaar lagu gaarsiiyay tuulooyinkii fatahaadaha saameeyeen ee Sh/Dhexe (Sawirro)
Hey’adda Gift of the Givers oo ka shaqeysa howlaha samafalka iyo Gurmadka Deg-dega ayaa gar-gaar kala duwan oo isugu jira mid caafimaad iyo agab kale waxay ay gaarsiiyeen Tuulooyin ka tirsan gobolka Shabeelada dhexe oo ay saameeyeen Fatahaadihii Wabiga Shabeelle.
Diyaaradaha dagaalka Israel oo duqeyn ka geystay Marinka Qaza
Diyaaradaha dagaalka ee Israel ayaa saaka duqeyn ka geystay Marinka Qaza ee dhulka Falastiniiyiinta, iyadoo duqeyntaas jawaab uga dhigay gantaal ay sheegeen in looga soo ganay, kaasoo ku dhacay gudaha Israel.
Qoyska Nafiiso Cismaan Salaad Oo Dowladda Ka Dalbaday In Sharciga La Horgeeyo Dhagar Qabayaashii Dilay Gabadhooda
Ehelada qoyskii ay ka geeriyootay gabar ardayad ah oo ay dileen maleeshiyaad ka tirsanaa Shabaab ayaa ka dalbaday dowladda in sharciga la horgeeyo kooxihii ka dambeeyay dilka gabadhooda.
Labo ka mid ah Baalayaasha ku shaqeeya Iftiinka Qoraxda ee degmada Hodan oo qarax lagu bur buriyay
Labo ka mid ah Baalayaasha ku shaqeeya iftiinka qoraxda ayaa saakay waabarigii hore lagu bur buriyay qaraxyo lagu xiray, iyadoo tani ay qeyb ka tahay weerarada lagu hayay baalayaaasha oo uu Maamulka Gobolka Banaadir ka hirgeliyay wadooyinka Muqdisho.
Taliska ciidanka xooga dalka oo qalabeeyay ciidankii u horeeyay ee dalka lagu tababaray (Sawirro)
Dowladda Soomaaliya ayaa markii u horeysay qalabeysay ciidamo lagu tababaray dalka gudihiisa, kuwaasoo ka qeyb qaadanaya howl galada ka dhanka ah Al-Shabaab ee ka socda gobolada dalka.
Haweeney dishay seygeeda oo ahaa sarkaal ka tirsan Ciidamada Nabadsugida qaranka
Haweeney ayaa xalay toogasho ku dishay seygeeda oo ahaasarkaal ka tirsan Ciidamada nabadsugida qaranka, iyadoo ciidamada booliska ay gacanta ku dhigeen haweeneydan oo su'aalo lagu weydiinayo mid ka mid ah saldhigyada ciidamada.
Dhageyso:Faahfaahin ku saabsan dil afar dhakhtar iyo laba ruux oo kale loogu geystay Maanta duleedka Magaalada Muqdisho
Sagal Radio Services • Audio/News Report • December 18, 2013
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya dil maanta barqadii afar dhaqatar iyo laba qof oo kale oo midkood uu ahaa darawalkii dhakhaatiirta iyo ruux ilaalo u ahaa loogu geystay deegaan lagu magacaabo Siinka dheer oo Muqdisho oo 15-km koonfureed kaga beegan.
Halkaan ka dhageys
Guddoomiyaha Baarlamaanka Oo La Kulmay Kaaliyaha Xoghayaha Arrimaha Dibadda Maraykanka Ee Afrika
Gudoomiyaha baarlamaanka Federaalka ah ee Soomaaliya Mudane Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari ayaa maanta Magaalada Muqdisho kulan kula qaatay Wefdi ay hogaaminayso kaaliyaha xoghayaha arrimaha dibedda Mareykanka ee arrimaha Afrika oo maanta soo gaartay magaalada Muqdisho.
Dhageyso:R/wasaare Saacid, Xildhibaanno Iyo Mas’uuliyiin Kale Oo Ka Qeybgalay Aaski Marxuum Maxamed Warsame Feysal
R/wasaare Saacid, gudoomiye ku xigeenka Labaad ee Barlamanka Xildhibaanno iyo mas’uuliyiin kale ayaa ka qeybgalay Aaska Allaha u naxariistee marxuum Maxamed Warsame Feysal oo ahaa godoomiyihii gudiga arriamaha bulshada baralamanka Soomaaliya oo shalay ku geeriyooday Qarax ka dhacay Muqdisho.
Maxamed Bashiir iyo dhibane faadumo oo sheegatay in ay kufsi u geysteen shaqaala ka tirsan wasaarada warfaafinta oo xabsi la dhigay manta.
Maxkamada Gobalka banaadir ayaa waxa ay goor dhawa xabsiga dhigtay gabar sheegtay in ay kufsi kula kaceen shaqaalo ka mid ah wasaarada warfaafinta Xukumada Soomaaliya iyo wariyihii wareystay.
Roobab la Filayo inay Saddexda Casho ee soo Socota si xiriir ah uga da’aan Deegaannada Puntland iyo Somaliland
Sagal Radio Services • News Report • November 19, 2013
Roobab xiriir ah ayaa la filayaa inay ka da'aan saddexda casho ee soo socota deegaannada Puntland iyo Somaliland, iyadoo la sheegayo in roobabkan aysan ahayn kuwa khasaare geysanaya sidii kuwii dhawaan ka da'ay deegaannada bari ee Puntland.
Deeqdii u horeysay oo daawo ah oo ka socota dowladda Soomaaliya ayaa shalay la gaarsiiyay magaalada Jowhar ee Gobolka Shabellaha Dhexe.
Ciidanka amaanka ee Magaalada Muqdisho oo manta xiray Idaacadii shabeele iyo shaqaalaheedii
Idaacadii shabeela ayaa gabi ahaaba waxa ay ka maqan tahay hawada ka dib marki ay manta gudaha u galeen ciidama ay ku soo amartay wasaarada Arimaha gudaha Soomaaliya in ay xiraan.
La heystayaal burcad badeed laga soo daayay oo ay dowladdu ka hadashay
Rag hubeysan oo Wajeer lagu xiray
Ciidamada ammaanka ee magaalada Wajeer ee gobolka Waqooyi Bari Kenya, ayaa soo xiray xalay afar ruux oo hubeysan, kuwaas oo saraakiisha ciidamada ay sheegeen inay baaritaano ku hayaan.